:Bọchị: Jenụwarị 2, 2020
Marmaray debere ihe dị ka ndị njem 500
Cahit Turhan Minister nke Transportgbọ njem na akụrụngwa, TCDD Transport nke Marmaray na-arụ n'obodo ahụ na-enye ezigbo ntụpọ maka ụgbọ njem ọha na Istanbul, YHTs na ụgbọ oloko ndị ọzọ, na-enye ohere njem Europe. Isi mmalite nke Isi-Kazlıçeşme [More ...]
Turkey n'ụzọ korido Bụrụnụ Abịawo
Transport na Infrastructure Minister Cahit Turhan, isi ụgbọ okporo ígwè na 2019 nke obula nke Turkey bụ otu n'ime ndị mbụ n'ụzọ ụgbọ oloko si China na Europe N'ikwu banyere ndabere bụ ụbọ, Marmaray na Baku-Tbilisi-Kars ụgbọ okporo ígwè [More ...]
Transport na Infrastructure Minister Cahit Turhan, na Asia ịbụ isi iga corridors n'etiti Europe na kwuru Turkey iji na-etolite n'ime lọjistik isi. Site na itinye ego ụzọ dị mkpa n'ime ụzọ ụgbọ oloko n'ime oke nke Logistics Master Plan, [More ...]
Cahit Turhan Minister nke andgbọ njem na akụrụngwa, ụgbọ ọhụrụ a na-agba ọsọ ọsọ (YHT) ga-etinye n'ọrụ, ọnụ ọgụgụ ndị na-ebugharị njem kwa ụbọchị ga-eru puku 2020 na ngwụsị afọ ikpeazụ nke 30, ka o kwuru. Turhan, TCDD ationgbọ njem Inc. [More ...]
Ankara Obodo Ankara agbagoro bọtịnụ ahụ maka ị nweta ihe ịchọ mma, ihe ịchọ mma na ọrụ nka nke kwekọrọ na gburugburu ebe okpuru ala na àkwà mmiri na mgbidi na-enweghị isi na isi obodo na mpaghara. Ngalaba Urban Aesthetics [More ...]
Kart54 karịrị nde 2019 na-eji 15
Kart54, nke na-eweta njem njem ọsọ ọsọ, mfe ma bụrụkwa nke ntụkwasị obi gaa Sakarya site na Obodo ukwu Metropolitan natara mmadụ 2019 na 47; ọnụ ọgụgụ ojiji karịrị nde 639 n'oge afọ. Sakarya [More ...]
Kocaeli Intercity Bus Terminal jeere nde mmadụ atọ n'otu afọ
Kocaeli Intercity Bus Terminal abụrụla nhọrọ mbụ nke ụmụ amaala na njem ụgbọ njem mgbe mmepere ọhụụ nke ndị isi obodo ukwu ahụ mejuputara. Ndị njem, yana ndị chọrọ ileta, na-ezipụ ndị agha, na-anọ oge na otu ụlọ nchekwa [More ...]
E mechiri DEMAR, nke so na ndị ọrụ ụgbọ oloko guzobere. The otu ebe ga-enye gị a pụrụ iche ahịa Turkey n'ụgbọala Industry A.Ş. (TÜVASAŞ) nke Railways Ọrụ Union òtù haziri na 1983, SSI eguzobewo ígwè Consumer Cooperative [More ...]
Amachibidoro ichere ndị njem nwere ọkọlọtọ na ọdụ ụgbọ elu Istanbul. A ga-eme ebe ọhụrụ maka ịnabata ndị njem. Ismail Sanli, onye isi nchịkwa mpaghara ọdụ ụgbọ elu Istanbul nwetara ọrụ nchekwa [More ...]
Yenikapı Hacıosman Metro Ga-anọ na Satọdee
Obodo isi obodo Istanbul ga-eje ije n'ahịrị M2 Yenikapı - Hacmanosman na Satọde na ụgbọ oloko asatọ na Satọde. Ọbụna ndị njem na-ebu ikike ga-eji pasent 8 rịa elu. Metro, onye enyemaka nke Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) [More ...]
Nde n $ TL tara ntaramahụhụ maka ụgbọ mmiri iri na atọ na-enyocha Ọkwa nke Izmit na 1 Afọ
Ngalaba Kocaeli Obodo Ime Mgbakọ Na-ahụ Maka Nchedo Gburugburu Ebe Obibi na Njikwa, enyeghị mmetọ na Izmit Bay. Otu egwuregwu na-arụ ọrụ awa iri abụọ na anọ kwa ụbọchị, ụbọchị asaa n’izu, ụgbọ mmiri iri na atọ n’afọ 7 [More ...]
Tünektepe Teleferik buuru puku mmadụ 2019 gaa nzụkọ ahụ na 500
Antalya Isi Obodo ANET A.Ş. Ebe Tünektepe Teleferik Facility, Sarısu na Topçam ntụrụndụ, Kadın Plajı na Zıp Zıp Park, nke Tektek na-arụ, mebiri ndekọ ndị ọbịa na 2019. Ihe omume n’afọ [More ...]
Obodo Denizli mepere emepe, nke na-akpọkọta ohere niile maka mmadụ niile ịme egwuregwu site na 7 ruo 70 na Denizli, na-amalite ebe egwuregwu sọọsọ na Denizli Ski Center nke ghọrọ ebe nkiri na-adọrọ adọrọ nke oge oyi. Obodo Denizli [More ...]
Denizli Cable Car na Bağbaşı Plateau kwadoro ndị mmadụ 5.500 na ụbọchị mbụ nke afọ ọhụrụ
N’ụbọchị mbụ n’afọ 2020, ndị bi na Denizli gbagoro na Denizli Cable Car na Bağbaşı Plateau dị mita 1500 n’ogologo. Bağbaşı Plateau jupụtara na ụmụ amaala na-achọ inweta ọ joyụ nke snow n'ụbọchị mbụ nke Afọ Ọhụrụ [More ...]